Global Voices teny Malagasy » Isiraely: Fankalazana ampifaliana ny Porima · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Marsa 2008 9:32 GMT 1	 · Mpanoratra Maya Norton Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Israely, Hafanàm-po nomerika, Hehy, Sakafo, Tanora, Tontolo_iainana, Zavakanto & Kolontsaina
Hoy i Hannah ao amin’ny Israelity :
Raha ohatra moa ianao monina any Isiraely ary mitady toerana hialana voly dia indro manome lisitry ny fihetsiketsehana isan-tanàna  i Israelity.
Fomba fanao iray mandritra ity fety ity ny fifandefasana fanomezana sy bisikitra anaty harona antsoina hoe mishloach manot any amin’ny tapaka sy namana havana sy tapaka. Volana maro mialoha ny fety, dia efa omanina sahady izany. Tamin’ity taona ity manokana dia nisy ezaka manokan’ny firenena manontolo natao hanomezam-boninahitra ny vahoakan’i Sderot , izay tafiditra ho ao anatin’ny faritra ifanandrinan’Isiraely sy Palestina. Mitantara ny fahatsaran’ny Porima izay mampientanentana indray i Josh mpanoratra ny Blogs of Zion (bolongan’i Ziona).
Ny bolongan’ny Mpaminany Maitso  ilay tsy mitsahatra ny mampahatsiaro tena indray dia mampirisika antsika hieritreritra ny tontolo iainana amin’ity Porima ity, manome ireto torohevitra avy amin’i Jack Reichert manaraka ireto:
Ra'anana Ramblings  (rediredin-dRa’anana), “i neny tsy manam-potoana” nampiana-tena manana fijery hafa momba ny mishloach manot, manontany tena hoe nahoana io no mety tsy mitondra fahasalamana. (Raha mbola tsy niaina ny Halloween amerikana ianao dia mety hanotany tena toyizany ihany koa.)
Mety hahavonjy ihany koa ny hevitr’ity reny iray hafa ity amin’izao fety izao. Nitondra hevitra mafonja vitsivitsy amin’ireo izay tra-pahasahiranana amin’ireo ankizy tsy mety hianjaika i Mia the Ima .
Vaovao fanampiny avy any anoloan’ny trano, Chanit ao amin’ny Ny nahandro sakafon’ny reniko sy hafa ihany koa  no maneho antsika ny Mofomamim-praomazy vita amin’ny voanjo tsy nahandroana natakana ho an’ny Porima. Tsidiho ny tranonkalany hijerenao ny nahandro omban-tsarin’io sakafo matsiro io.
I Jacob Richman haingam-pamokarana, mpanoratra ny Good News from Israel blog (bolongan’ny Vaovao Tsara avy any Isiraely) ohatra dia manolotra ho antsika ny lisitry ny lahatsary 56  azo jerena ao amin’ny YouTube.
Miavaka amin’izany ny Hypersemika “Hiran’i Hamàna: Rap Porima” noforonin’ilay mpampianatra hira Jiosy, Matt Bar, mpamorona ny Tetikasa Baiboly hiraina Rap .
Raha mamaky eto momba ny Porima ianao, dia tsindrio ny Together4Israel  hidiranao ao amin’ny hetsika manerantany hanohanana an’Isiraely izay tontosaina ao Sderot mampivoitra ny fokonolona jiosy manerantany– ezaka haitao mampiaiky volana. (azonao arahina ny Lahatsary aorian’ny fampisehoana.)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/03/30/739/
 lisitry ny fihetsiketsehana isan-tanàna : http://www.israelity.com/?p=4788
 Blogs of Zion: http://www.blogsofzion.com/blog/?p=1294
 bolongan’ny Mpaminany Maitso: http://greenprophet.com/2008/03/19/eco-purim/
 Ra'anana Ramblings: http://raananaramblings.blogspot.com/2008/03/purim-ponderings.html
 Mia the Ima: http://mia-the-ima.blogspot.com/2008/03/costumes-for-children-who-dont-like-to.html
 Ny nahandro sakafon’ny reniko sy hafa ihany koa: http://momsrecipesandmore.blogspot.com/2008/03/no-bake-date-pistachio-cheesecake-for.html
 Good News from Israel blog: http://jrichman.blogspot.com/2008/03/56-cool-youtube-purim-videos.html
 lahatsary 56 : http://www.jr.co.il/videos/purim-videos.htm
 Tetikasa Baiboly hiraina Rap: http://www.bibleraps.com/about-the-project.html